Drainage uye tsvina pombi dzakateedzana fekitori - China Drainage uye tsvina pombi akateedzana Vagadziri, Vatengesi
Simbi bhandi yakasimbiswa polyethylene (HDPE) yemhepo yakakora mutopota rudzi rweyakaumbwa madziro pombi ine HDPE uye simbi tepi fusion inosanganiswa. Dhizaini yemadziro inoumbwa nematatu: iyo yemukati dura inoramba ichiita yakasimba madziro emukati pombi pombi uye yepombi pombi yakakuvara uye yakasanganiswa kunze. Iyo bhandi resimbi rakapetwa kuita U-rakaumbwa annular corrugated simbi strip inosimbisa, uye iyo yakasanganiswa corrugated simbi strip inosimbisa inosanganiswa neiyo imwechete yekunze rukoko rweHDPE se ...
HDPE ichitenderera yakasimbiswa chimiro madziro mhando B pombi inonziwo HDPE ichitenderera mamiriro emadziro pombi, carat chubhu, HDPE ichitenderera mhando B pombi, yakakwira density polyethylene ichitenderera pombi, mhando B chimiro chemadziro pombi. Iyo mhando nyowani inochinjika pombi ine huremu hwakareruka, yakasimba simba, inotsvedza yemukati madziro, ngura kuramba, kukwegura kuramba, kupfeka kuramba, kumanikidza kuramba, yakasimba kukanganisa kuramba, kugona kwakanaka, hutano uye chengetedzo. Hunhu hwesimbi iri kumusoro, muviri wakabatana, iyo qua ...
Pombi dzakasarudzika dzakagadzirwa kubva kumusoro-density polyethylene zvinhu zvine yakatsetseka yemukati madziro, makorari ekunze madziro, uye nzvimbo dzakakombama pakati pemukati nekunze masvingo anonyanya kushandiswa kune yakavigwa tsvina netsvina. panguva yekugadzirwa. Iyo mbiri-yakatetepa pombi madziro akaomarara. Iyo inoshandisa inofambidzana kubatana nezvisikwa rabha zvisimbiso, izvo zviri nyore kuisa, zvakachengeteka zvakabatana, zvisiri nyore kudonha, uye ine yakaderera kunzwisisa ...
Iyo mbichana zvinhu zvekugadzirwa kweichi chigadzirwa chinoshandurwa PP zvinhu: iro rakatsetseka remukati madziro uye ekunze madziro anoratidza yakasarudzika annular ripple, uye yemukati neyekunze madziro haana mhango. Kemikari kuramba uye ngura kuramba: Kuramba kuora kweakasiyana makemikari midhiya senge acid, alkali, munyu, nezvimwewo pachayo chinhu chakanakisa chinorwisa ngura zvinhu, uye hachizokanganiswa neinoora zvinhu muvhu. Impact kuramba: Iyo pombi madziro inotora yakasarudzika mamiriro, impac ...